Madaxweynaha Mareykanka oo amray in dib u eegis lagu sameeyo galka baarista weerarradii September 11 | Star FM
Home Caalamka Madaxweynaha Mareykanka oo amray in dib u eegis lagu sameeyo galka baarista...
Madaxweynaha Mareykanka oo amray in dib u eegis lagu sameeyo galka baarista weerarradii September 11
Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa saxiixay islamarkaana amaray hay’adda FBI-da in ay kala shaandeyso dukumentiyada la xiriira weeraradii argagixiso ee dhacay 11-kii September ee sanadkii 2001-dii.
Weerarradaasi oo ayaa lagu qaaday daarihii mataanahaa ahaa ee lagu weeraray diyaaradaha ee magaalada Newyork.
Amarkan oo soo baxay shalay ayaa taageerro u ah qoysaska dhibbanayaashii weerarkaas oo muddo dheer raadinayay diiwaannada dhacdadaasi oo ay filayaan in laga heli doono ku lug ku yeelashada weerarkaas ee boqortoyada Sacuudiga.
Baaritaanno hore loo sameeyay ayaa lagu qeyxay in uu xiriirka ka dhexeeyay muwaadiniinta Sacuudiga iyo qaar ka mid ah afduubayaashii diyaaradihii weerarka lagu fuliyay, inkasta oo aan la xaqiijin in ay dowladda Sacuudigu wax lug ah ku laheyd.
Next articleJimmy Wanjigi oo sheegay inuusan aqbaleynin isreebreeb aan xalaal ahayn
Kooxda Taalibaan ee bishii hore la wareegtay hoggaanka wadanka Afghanistan ayaa codsatay in ergey ay soo magacawday uu khudbad ka jeediyo shirka sanadlaha ee...
Golaha wakiillada ee Maraykanka ayaa lagu wadaa inay ansaxiyaan miisaaniyad dhan 6.3 bilyan oo doolar taasoo loo adeegsan doono in dib u dejin loo...